किन सँगै बस्दैनन् पारस र हिमानी ? कारण यस्तो !  Hamrosandesh.com
आफ्ना उद्दण्ड गतिविधि र पारिवारिक किचलोका कारण सधैँ चर्चा र विवादमा छाइरहने पूर्वयुवराज पारस शाह पछिल्ला दिनमा गुमनामझैँ छन् । कुनै वेला रक्सी, गाँजा, चरेस र झैझगडा उनको पर्यायझैँ मानिन्थ्यो । यिनै कारणले पारस सधैँ समाचारमा छाइरहन्थे । तर, पछिल्लो समय उनी समाचारका हेडलाइन पनि बन्न छाडेका छन् ।
-गज्जबको साप्ताहिकबाट/ योगेश ढकाल